Mhou yandaona kuTarget Kogje kuMasvingo. Ava ndivo mai vemhuru.
Mhuru dzemhou dzandaona kuMasvingo. Ava ndivo vana vemhou idzo dzandaona.
Mwana wen'ombe anonzi mhuru. Mai vacho vachinzi mhou. Baba vacho vachinzi ngunzi. Mwanasikana wen'ombe ava kuzera rekuita mhuru anonzi tsiru. Mwanakomana wen'ombe anonzi dhonza. Mukweguru wen'ombe anonzi dore kana kuti nhore. N'ombe yakachekwa inonzi ngavi.
ZveMasvingo takamirira kutanga kweGreat Zimbabwe International Festival
Tiri muMasvingo musha mukuru pamisha mizhinji. Tiri kumirira vanhu vachabva k kunvzimbo dzakatenderedza kuzowadzana nesu tichiseka. Nhasi tichanzwa kuimba kwavanhu vekuno nevemamwe matunhu. Ndiri kuvonana navanhu vakawanda chose vandinofunga kuti vachaita kuti dandaro rino ribve rafuma neruzivo rwezvizhinji. Tichagoverana zviri mudara rino zvatichasangana nazvo muguta reMasvingo. Handinyimwe. Hahwi kuny'ima kwakashata. Wany'ima haadyli zvizhinji.
Zvimwe zvezviratidzwa zvepaZIBF 2018
Ndakasviko zuro ndikatenderera ndichiona zvaiitwa nezvairatidzwa paZIBF Grounds sehurongwa hwezviratidzwa hwamabhuku ndikaona kuti vana vari kutenderera vachitsvaka zvekurava uye kusongana nevanyori vakasiyana-siyana pamwe nekuwaniswa mukana wekuita ngano kuChildren's Tent. Nhasi kuchichena zviratidzwa zvemabhuku zvegore ra2018 zvopera mukuvira kwaro zuva. Varatidzi vemabhuku vanga vari vashoma chose sezvo dzimwe kambani nemasangano anosiratidzira asina kuzouya kuguwerere remabhuku iri. Zvichida zvakasakiswa nenyaya yekuti sezvo mazuva ekuita guwerere iri akapfurikidzwa mberi nekuda kwekorera.
ZIBF INDABA 2018 tapedza zvino. Kwasara zvekuratidzwa kwemabhuku
Pane kuzotenga mabhuku akakoponorwa nenhusvuri, vabereki, zvikoro nemayunivhesiti pamwe nemaraibhurari yava nguva yekuti muchiuya kuzozvitengera mabhuku kubva kuvatsikisi vawo. Hanzi, "Unhusvuri humbavha" ndiDr Samuel Makore veZimcopy.
ZIBF INDABA 2018 dingindira regor.
Zambia neZimbabwe paZimbabwe International Book Fair 2018
Mihla Sitsha, Aaron Chiundura Moyo, Annah S. Sibanda, Mzana Mtimukhulu (Zimbabwe) naDR Cheela Chilala (Zambia) mushure mekupera kwezuva rekutanga reZimbabwe International Book Fair 2018. Maguwerere anosanganidza vanhu vachitaura nezveupenyu, tsika namagariro avanhu. Zimbabwe neZambia zvakaparadzaniswa nerwizi Zambezi asi dzinogoverana Victoria Falls, Rwizi Zambezi, uye dhamhu reKariba. Zvakadero dzinogoveranazve tsika namagariro sezvo mamwe emarudzi evanhu vanogara kuZambia vakambenge vari muZimbabwe uye vamwe vanogara muZimbabwe vakambenge vagari vemuZambia. Mufananidzo naTinashe Muchuri, Great Indaba Room, Monomutapa Crown Plaza Hotel, Harare. 2018.
Keynote and Guest Speaker- Mukokwa mukuru wemashoko akakosha
Vapakuri vekutanga vechikamu chekutanga muZIBF Indaba 2018. Ingnatius Mabasa naRoseline Torai Kumvekera.
Tiri muGreat Indaba Room paMonomutapa Crown Plaza muguta reHarare. Tiri kunakirwa, kuwana ruzivo rutsva nekutandadzwa. Kubva pano nyaya dzedu dzinofanira kuwanikwa mazuva ose nguva nenguva. Ngativandudze ruzivo rwedu. "Ngaruve runovaka ruchibva matiri kwete kuramboridza ngoma dzavamwe sekurevava kwaCharles Mungoshi muna Waiting for The Rain" - Ignatius Mabasa, 2018.
Mutauri wemashoko akakosha Prof Peter Wasamba wekuKenya anova mudzidzisi negweta.
Vamwe vari kuterera Prof Peter Wasamba achitura mashoko akakosha paZIBF Indaba 2018.
- October 22, 2018 No comments: Links to this post
ZveMasvingo takamirira kutanga kweGreat Zimbabwe I...
ZIBF INDABA 2018 tapedza zvino. Kwasara zvekuratid...
Zambia neZimbabwe paZimbabwe International Book Fa...
Keynote and Guest Speaker- Mukokwa mukuru wemashok...
The Folklore In the Modern Era- Ngano mumazuva ano...
ZIBF yavamba nhasi
Mwana weinda anonzii?
Mvura yekutanga muHarare
ZIBF yadzoka mazuva a2018 aziviswa